Madheshvani : The voice of Madhesh - News Portal- सिंहदरबार गाउँमा होइन, जनता राज स्थापित गर्छौं
वीरेन्द्र माझी, मेयर, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, सप्तरी (जनमत पार्टी),
० जनताले तपाइँलाई के म्याण्डेड दिएर जिताए ?
— हाम्रो पहिलो एजेण्डा भ्रष्टाचारविरोधी अभियान नै हो । जनमत पार्टीले विगतमा पनि भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन चलायो । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने लगायतका कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट प्राप्त बजेटको स्थानीय तहमा धेरै दुरूपयोग भएको हामीले हरेका छौं । त्यसैले, हाम्रो नगरपालिकामा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँछौं । यहाँका जनताले सामन्तवादको अन्त्य गरेका छन् । अब जनता राज स्थापित हुन्छ । यो हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा जनता राज आइसक्यो । म मेयरमा निर्वाचित भइसकेपछि धेरै संख्यामा जनताहरू विजय जुलुसमा सहभागी भएर एउटा सन्देश दिए कि यहाँ अब जनता राज कायम भयो । हामीले जनमत पार्टीको एजेण्डाअनुसार काम गर्नेछौं ।
० जनमत पार्टीले विगतमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई छोटे राजाको संज्ञा दियो, व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन्छ भनेर भन्यो । अब त्यो ठाउँमा जनमत पार्टीको प्रतिनिधि आएका छन्, भ्रष्टाचार र अनियमितता हुँदैन भनेर कसरी सुनिश्चितता गर्नुहुन्छ ?
— यसअघि यो पालिकामा खुल्लारूपमा भ्रष्टाचार र अनियमितताहरू भइरहेको हामीले हे¥यौं । विगतका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका भ्रष्टाचार वा अनियमितता अब यो पालिकामा हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु । कुनै पनि योजना वा कार्यक्रममा कमिशन हुन्थ्यो त्यो कुरा पूर्णरूपमा यहाँ बन्द हुन्छ । पहिला यो नगरपालिकामा करारमा कर्मचारी राख्दा लाखौं रूपैयाँ घुस लिइन्थ्यो । तर अब ती कुराहरू हुँदैन । जनताले नै त्यस्तालाई जवाफ दिइसकेका छन् । हामी जनताको भावनाअनुसार काम गर्छौं । विभिन्न चुनौतीहरू हाम्रा सामु छन्, ती सम्पूर्ण चुनौतीहरूलाई चिर्दै जनमत पार्टीले जनता राजको अनुभूति गराउँछ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिखोरी अन्त्य गर्ने, जनता राज ल्याउने हाम्रो नारा मात्रै होइन, गरेर देखाउँछौं । विगतमा हामीले नारा दियौं अब त्यो नारालाई पूरा गर्ने समय आएको छ ।
० भनेपछि जनमत पार्टीले नेतृत्व गरेको पालिका वा वडामा भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका कुराहरू सुनिँदैन ?
— निश्चितरूपमा । जनमत पार्टी मात्रै एउटा यस्तो पार्टी हो, जसले भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन नै चलायो । अरू कुनै पनि पार्टीले आजसम्म भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन चलाएका छैनन् । हामीले भ्रष्टाचारीलाई जनकारबाही पनि गरेका छौं । त्यसकारण जनताले हामीमाथि विश्वास गरेको छ । अहिले हामी जुन किसिमको काम गर्छौं, अनि जनताको विश्वास हामीमाथि झन् बढ्छ । यहाँका जनता भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सक्रिय भइसकेका छन् । विगत पाँच वर्षमा जनता कसरी ठगिए त्यो कुरा अनुभूति गरेका छन्, त्यसको जवाफ जनताले ब्यालेटमार्फत् दिइसकेको छ । जनमत पार्टीको जीत भनेको जनताको जीत हो । यदि हामी सफल नभएको भए यहाँ फेरि पाँच वर्षसम्म जनताले सामन्तवादको सामना गर्नुपथ्र्यो । यहाँका जनता सचेत छन् । यसअघिका मेयर नगरपालिकामा कहिल्यै बस्नुभएन । आफ्नै घरमा बस्नुहुन्थ्यो, सर्वसाधारण जनता कहिल्यै भेट्न पाउँदैथ्यो । जोसँग पहुँच हुन्थ्यो उसले मात्र भेट्न पाउँथ्यो । म एउटा गरिब परिवारको हुँ, एउटा गरिब मान्छेले पनि राजनीति गर्न सक्छन् भन्ने कुरा जनमत पार्टीले स्थापित ग¥यो ।
० तपाइँको मुख्य प्रतिस्पर्धा निवर्तमान मेयर, जो मधेश प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीका छोरा हुन, उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कति रूपैयाँ खर्च गर्नुभयो त ?
— हामी पैसा बाँडेर, रक्सी, मासु आदि खुवाएर चुनाव जितेका होइनौं । हाम्रो एकदम न्यून खर्च भएको छ । हामीले प्रचार प्रसार, पर्चा, पम्पलेट आदिमा मात्रै रूपैयाँ खर्च गरेका थियौं । चुनावमा मेरो खर्च भनेको बढीमा दुईदेखि अढाई लाख रूपैयाँसम्म मात्रै खर्च भएको छ । त्यसबाहेक हाम्रो कुनै खर्च भएको छैन ।
० चुनावमा उम्मेद्वाहरूले पैसा बाँडेको कुराहरू सुनियो, तपाइँले पैसा बाँड्नुभएन त ?
— पैसा बाँडेर चुनाव जितियो भने त्यो बाँडेको पैसा पनि उठाउनुप¥यो, त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ ? त्यहीं भ्रष्टाचार गरेर । त्यसैकारण हामीले भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन चलायौं । हामीले पैसा नै बाँडेको छैन भने भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने कुनै कारण नै हुँदैन । भ्रष्टाचारको सुरूवात नै यस्तै प्रवृत्तिबाट हुन्छ । जसले पैसा खर्च गरेर कुनै पदमा पुग्छन्, त्यसको कैयौं गुणा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेर उठाउँछन् । हामी त्यसको सख्त विरोधी हौं । हामी स्वच्छ राजनीतिकरूपमा अगाडि बढेका छौं, जनताले विश्वास गरेका छन् । आउने दिनमा जनतासँग कुनै किसिमको धोका हुँदैन भन्ने विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु ।
० करोडौँ रूपैयाँ खर्च नगरिकन चुनाव नै जित्न सकिँदैन भन्ने माहोल थियो, चुनाव जित्न कति चुनौतीको सामना गर्नुभयो ?
— हामी धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि आएका छौं । हामीले पैसा खर्च गरेनौं तर वैचारिक राजनीतिलाई अगाडि बढायौं । अब मधेशका जनता सचेत हुँदैछन्, हामीले विचारलाई अगाडि बढाउँदै राजनीतिक संस्कारको विकास गर्दैछौं । हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको सफलता पाउन सकेका छैनौं, तैपनि हाम्रो जीत भयो । चुनावको पूर्वसन्ध्यामा अन्य उम्मेद्वारहरूले धेरै पैसा खर्च गरे, तर पनि अधिकांश जनताले हामीलाई नै विश्वास गरे । सामन्तवादीहरूले पैसा बाँड्दा पनि जनताले परास्त गरिदिए । त्यसैले हामीले यो जीतलाई जनताको जीत भन्छौं । हामी जनताको सेवा गर्न आएका हौं, हामीमाथि जिम्मेवारी थपिएको छ । त्यो जिम्मेवारी निश्चितरूपमा पूरा गर्छौं ।
— म एउटा किसानको छोरा हुँ । जनमत पार्टीले किसानको हकहितका लागि आन्दोलन ग¥यो । म मेयरमा निर्वाचित भइसकेपछि पालिकास्तरबाट किसानका लागि के–के गर्न सकिन्छ, त्यो पूरा गर्ने सक्दो प्रयास गर्छौं । यसअघि मधेश प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीका छोरा यहाँ मेयर हुनुहुन्थ्यो, जुन मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा पनि पर्छ । तर शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधार भएको छैन । विगत पाँच वर्षमा यो पालिकामा शिक्षाको स्तर झन् दयनीय अवस्थामा पुगेको छ । अहिलेसम्म हाम्रो पालिकामा १०+२ को कक्षा छैन । म आफ्नो कार्यकालभित्र १०+२ को पढाई सुरू गराउँछु । अँग्रेजी माध्यममा विद्यालयहरूमा पढाई सुरू गर्छौं । त्यसको गृहकार्यमा हामी लागिसकेका छौं । यस्तै, सीपमूलक रोजगारका लागि तालिमहरूको व्यवस्था गर्छौं । हाम्रो पार्टीको एजेण्डा नै हो कि १० जना युवाको रोजगारी त्यसका लागि हामीले तयारी गरिरहेका छौं । बेरोजगारीको समस्या, विदेशिनुपर्ने अवस्था लगायतलाई हामी समाप्त गर्ने प्रयास गर्छौं ।
० जनमत पार्टीले “सबको देखे बार–बार, अबकी बार जनमत सरकार” भन्ने नारा दिएको थियो । त्यो भनेको के हो ?
— वास्तवमा जनताले सबै दललाई हेरिसकेका छन्, जो आएपनि जनताका समस्याहरू समाधान हुन सकेको छैन । त्यसैले हामी अब जनताको समस्याहरू ती पुराना दलहरूले समाधान गर्न सक्दैनन् । किनभने उनीहरूसँग भिजन छैन । उनीहरू पैसा कमाउनका लागि मात्रै राजनीति गरिरहेका छन् । तर हामीलाई एकपटक जनताले विश्वास गरोस्, यदि हामी गर्न सकेनौं भने फेरि अर्को चुनावमा सजाय दिने नै छ । त्यसकारण हामीले भनेका छौं कि एकपटक हामीलाई मौका दिनुस् भनेर भनेका थियौं । हामीले अपेक्षा गरेनुसारको सफलता त प्राप्त गर्न सकेनौं तर जहाँ–जहाँ जनमतका प्रतिनिधिहरू विजयी भएका छन्, त्यहाँ एउटा उदाहरणीय कार्य हुनेछ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।
० सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने नारालाई अनुभूति गराउनु हुन्छ ?
— हामीले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा होइन, जनता राज भन्ने स्थापित गराउँछौं । विगतका पाँच वर्षमा जनताले गाउँ–गाउँमा सिंह मात्रै पाए, तर दरबारको अनुभूति गर्न सकेनन् । हामीले सिंहदरबार होइन, जनताले चाहेको, खोजेको कुरा पूरा गर्न आएका हौं । हामी दरबारमा बसेर जनतामाथि राज गर्ने होइन, जनतालाई मालिक बनाउन आएका हौं । जनताका सेवकको रूपमा काम गर्नेछौं । त्यसैले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार आवश्यक छैन, जनताको राज हुनुपर्छ ।